रोनाल्डो कि मेस्सी ? भन्ने प्रश्न गर्दा यसो भन्छिन् विश्वकप विजेता मोर्गान
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलरोनाल्डो कि मेस्सी ? भन्ने प्रश्न गर्दा यसो भन्छिन् विश्वकप विजेता मोर्गान
अमेरिकालाई आठौं संस्करणको फिफा महिला विश्वपकको उपाधि दिलाउन सफल खेलाडी एलेक्स मोर्गानले अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेस्सी उत्कृष्ट भएको बताएकी छन् । ३० वर्षीय मोर्गानले इएसपीएनसँगको कुराकानीमा पोर्चुगज स्टार खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोभन्दा मेस्सी उत्कृष्ट भएको बताएकी हुन् ।
मोर्गानले आफूलाई सन् २०१५ सम्म रोनाल्डो उत्कृष्ट लागेको तर अब भने मेस्सी उत्कृष्ट लाग्ने बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘मलाई २०१५ सम्म रोनाल्डो संसारकै उत्कृष्ट खेलाडी लाग्थ्यो । तर, अहिले मेस्सी उत्कृष्ट लाग्छ ।’
मेस्सी कि रोनाल्डो ? भन्ने प्रश्नमा अमेरिकी राष्ट्रिय महिला फुटबलकी उपकप्तान मोर्गानले भनेकी छन्, ‘म मेस्सी नै भन्न चाहान्छु, उनी धेरैभन्दा धेरै उत्कृष्ट छन् । मैले देखेका अन्य खेलाडीको तुलनामा उनी एक उच्चस्तरका खेलाडी हुन् । मेस्सी वास्तवमै रोमाञ्चक खेलाडी हुन् ।’
मोर्गानले अमेरिकालाई फ्रान्समा हालै मात्र सम्पन्न भएको महिला विश्वकप २०१९ को उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन् । अमेरिकाले नेदरल्याण्डलाई हराउँदै कीर्तिमानी चौंथोपटक विश्वकपको उपाधि जित्न सफल भएको थियो ।